Liverpool oo dooneysa burburiyaha Lille ciyaaryahan Renato Sanches & Wijnaldum oo ka tagaya
HomeHoryaalka FranceLiverpool oo dooneysa burburiyaha Lille ciyaaryahan Renato Sanches & Wijnaldum oo ka tagaya
January 14, 2021 Horyaalka France, Horyaalka Ingiriiska, Wararka Maanta 0
Liverpool ayaa si aad ah u dooneysa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Lille Renato Sanches, waxaana ay in ay lasoo wareergaan kahor inta uusan u dhaqaaqin koox kale inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaygan.
Ninka Sky Sports ka tirsan ayaa meesha ka saaray inuu u dhaqaaqayo xiddiga reer Portugal bishaan, taasna lama yaabin maadaama saxiixa daafac dhexe uu yahay muhiimadooda koowaad haatan.
Iyadoo Virgil van Dijk, Joe Gomez iyo Joel Matip ay dhamaantood dhaawac yihiin, Reds ayaa sameyn karta daafac kale oo dhexe haatan, waxayna sugi doonaan ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka ka hor inta aysan xoojin boosaska kale.
Liverpool ayaa waayi doonta fallaagada ah ee diiday heshiiska ee Georginio Wijnaldum dhamaadka xilli ciyaareedkaan, iyadoo kaliya lix bilood ay uga harsan tahay qandaraaska uu haatan kula joogo kooxda Liverpool.
Waxay u baahan doonaan inay keensadaan bedel tayo leh markii uu baxo, Sanches-na waxay noqon karaan xulasho dhammaystiran.
Tababaraha Reds Jurgen Klopp ayaa la sheegay inuu taageere u yahay qaab ciyaareedka xiddiga Lille, taasna waxay sahli doontaa in xidiga yimaado xili ciyaareedkan.
Le10sport ayaa sheegtay horaantii bishaan in Liverpool ay u aragto 23 jirkaan inuu yahay dooqa koowaad ee badalka Wijnaldum waxaana la filayaa inuu ka tago Ligue 1 xagaagan madaama kooxaha heerka koowaad ee France ay u baahan yihiin lacag.
In kasta oo ku guuleystihii Horyaalkii Yurub ee 2016 uu sidoo kale flop ku ahaay Bayern Munich, haddana wuxuu dib u soo nooleeyay xirfaddiisa Lille wuxuuna soo jiitaa Liverpool iyo kooxo kale oo doonaya.
Ku laabashada horyaalka heerka koowaad ee England si loo muujiyo inuu rafcaan u qaadan karo hal mar oo ah Wiilka Dahabiga ah, iyo ku biirista Liverpool ayaa siin doonta isaga fursad fiican uu ku sameeyo.